Archives des Antohomadinika - Midi Madagasikara
Antohomadinika : Roalahy notifirin’ny jiolahy tamin’ny basy
Redaction Midi Madagasikara 15 avril 2014 Antohomadinika, basy, Jiolahy, kalachnikov
Vao maraina, vao mangidran-dratsy akory aza, dia efa nirefotra ny basy tetsy Antohomadinika. Nandritra ny fanafihana toeram-panaovana sy fivarotana mofo no nitrangan’ity asan-jiolahy ity. Tokony ho tamin’ny efatra ora sy sasany no niditra tampoka tao anatin’ilay toerana ny efa-dahy mirongo kalachnikov. Ny iray niandry taty ivelany raha niditra tao anatiny ny telo hafa ka nandrahona tamin’ny…
Antohomadinika : Potika ny taovan’ilay lehilahy nisotro asidra
Redaction Midi Madagasikara 13 mars 2014 Antohomadinika, nisotro asidra, Potika, taovan’ilay lehilahy
Tsy nahatohitra ny onjam-pianina mianjady aminy sy fianakaviany ity lehilahy iray ka ny zavatra hitany fa mety dia ny mamonotena. Teny Antohomadinika no niseho ity zavatra ity ny alin’ny talata lasa eo. Ny vaovao voaray no nahafantarana fa nisotro asidra izy. Tsy nahafaty azy anefa izany fa rehefa novonjena nentina tany amin’ny hopitaly izay dia…
Antohomadinika : Fivarotana telo indray voatafika, lasa ny vola 1 tapitrisa ariary
Redaction Midi Madagasikara 12 mars 2014 Antohomadinika
Tsy mampitahotra ny mpandroba intsony amin’izao fotoana izao ny hamaroan’ny olona eny an-dalana. Sahiny ny manendaka ankitsirano Ny harivan’ny alatsinainy teo, tamin’ny 7 ora tany ho any, fivarotana miisa telo indray no nasesin’ny jiolay mitam-basy notafihana teny Antohomadinika. Ny vaovao voaray no nahalalana fa raha atambatra ny vola lasan’ireo olon-dratsy dia tafakatra hatrany amin’ny 1…
Redaction Midi Madagasikara 21 janvier 2014 15 lahy nanolana, Antohomadinika, mpandeha an-tongotra, Soldat, Toliara, very kalachnikov
Toliara : “Soldat” very kalachnikov Miaramila iray no very basy rehefa niampita rano tamin’ny faran’ny herinandro teo. Kalachnikov no nentiny ary io no nentin’ny rano, raha araka ny fanampim-baovao azo. Tsy nafeniny ny zava-nisy ary nampahafantarina ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany, tonga hatrany amin’ny minisitera tompon’andraikitra. Antohomadinika : 15 lahy nanolana mpandeha an-tongotra Nanendaka aloha izy ireo…